आईप्याड हाइप ... किन तपाई पछि हुनुहुन्छ | Martech Zone
आईप्याड हाइप ... तपाई पछि किन हुनुहुन्छ
सोमबार, फेब्रुअरी 7, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हामीसँग एक जोडीले गुनासो गरे कि ब्लगमा आईप्याडमा मुद्दा छ जहाँ उनीहरूले वास्तवमा पोष्टहरू पढ्न सक्दैनन्। यो दशौं व्यक्तिको बारेमा थियो जसले हाम्रो ब्लग र आईप्याडको बारेमा गुनासो गरे त्यसैले म अन्ततः विच्छेद भयो र हामीले केही खरीद गर्यौं। एउटा मेरो लागि हो, एकको लागि स्टीफन, हाम्रो विकासकर्ता ... र अन्य एक तपाईं भाग्यशाली पाठकहरूको लागि हो।
केही दिन पछि र म पूर्णतया काटिएको छु। आईप्याड थोरै भारी छ मैले सोचेको भन्दा यो धेरै नै छ, तर यो धेरै हल्का ल्यापटप झोलाको लागि बनाउँदछ जब म हरेक रात घर फर्कन्छु। स्क्रिन परिभाषा एकदम अचम्मको छ र इन्टरफेस धेरै छ, ठीक छैन भने, आईफोन जस्तै। मैले एउटा खरीद गरेकोमा ठट्टा गरे ... यो फोन र क्यामेरा बिना पैसाको बर्बाद जस्तो देखिन्थ्यो (मैले सुनेको क्यामेरा मार्चमा बाहिर आउँदैछ)। यो भएको छैन।
मैले पहिल्यै लेखेको छु दैनिक र यस एप्लिकेसनको साथ मेरो चासो जुन यस समाचारलाई साँच्चिकै राम्रो तरिकाले डेलिभर गर्दैछ, तर आईपेडको लागि मेरो अधिकांश प्रेम भनेको विकासकर्ताहरूले टचको फाइदा उठाएका र रियल ईस्टेटको राम्रो अन्तरक्रिया प्रदान गर्ने तरीका हो।
मैले देखाउन मन पराउने उदाहरण हो फ्लिपबोर्ड, एक अनुप्रयोग जसले तपाइँको सबै सामग्री सफा व्यवस्थित पृष्ठहरूमा धकेल्छ जुन तपाइँ सजीलै फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उनीहरु, जवाफ दिनुहोस् ट्विटर, अगाडि, वा ईमेल मार्फत लेख पठाउनुहोस्। अनुप्रयोग प्रयोग गर्न एकदम सजिलो छ कि म वास्तवमा मेरो RSS फिडमा फर्किएको छु र अब प्रत्येक बिहान तिनीहरूलाई खाँदै छु।
यहाँ बजारका लागि कुञ्जी बुझ्दैछ कि, फेरि, तपाईंको कुराकानी तपाईंको साइटसँग परिवर्तन हुँदैछ। म सबैलाई बाहिर जान र आईप्याडको लागि एक अनौंठो प्रयोगकर्ता इन्टरफेस अनुकूलन गर्ने अपेक्षा गरिरहेको छैन (यद्यपि हामी अब यसलाई हेर्दै पनि छौं), तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि यी उपकरणहरू मध्ये कुनै एकमा तपाईंको साइटलाई पढ्न योग्य बनाउनु भन्दा तपाईं अझ बढी गर्नुहोस्। आईप्याड प्रयोगकर्ताको रूपमा, म आधिकारिक रूपमा विशिष्ट साइटको साथ बोर छु र म अर्को महान प्रयोगकर्ता अनुभव खोज्दै छु।
यस हप्ताको विजेता
यस हप्ता, curiousmeboston @_______ जितियो! हामी तिनीहरूबाट पुरस्कार सुन्न कुर्दै छौं कि उनीहरूले के पुरस्कार छनौट गर्न चाहन्छन्। त्यहाँ धेरै पुरस्कार आउँदै छन् - सहित फार्मस्ट्याक - सजिलै अनलाइन फारामहरू निर्माण गर्नुहोस्, भोंटु - आवाज रिमाइन्डरहरू पठाउनुहोस्, र टिन्डरबक्स प्रस्ताव सजीलै अनलाइन बनाउनुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस् र ट्र्याक गर्नुहोस्!
फेब्रुअरी १,, २०११ 8:१:2011 अपराह्न
डग, पार्टीमा स्वागत छ!
जब म प्रारम्भिक रूपान्तरणकर्ता हुँ (र अझै पनी वस्तुलाई माया गर्छु), जब म 74 XNUMX वर्ष पुरानो बुबाले मैले गर्नु भन्दा पहिले एउटा अर्डर गरेको थियो तब मैले के सिर्जना गरेको थियो भन्ने कुराको सत्यता बुझेकी थिएँ र अब अर्कोमा विचार गर्दैछ किनभने एउटा पर्याप्त छैन। उसको दुई व्यक्तिको घर। रचनात्मक विकासको साथ उत्कृष्ट औद्योगिक डिजाइनको अर्को उदाहरण। आईफोनले जस्तै, उत्तम सुविधा भनेको सफ्टवेयर हो र यो तथ्य यो हो कि अनुभवलाई लगातार उत्तम अनुप्रयोगहरूले सुधार गर्न सक्दछ।
दैनिक यस पुनरावृत्ति प्रक्रियाको एक राम्रो उदाहरण हो। जबकि यो धेरै राम्रो, नयाँ, र अरू कुनै कुरा जस्तो उपलब्ध छैन, त्यहाँ सुधारको लागि अझै ठूलो कोठा अझै छ (धेरै ढिलो चल्छ, अपडेटहरूले धेरै लामो लिन्छ, आदि।) तर तथ्य यो हो कि यसले * अझ राम्रो हुँदै जान्छ। , उपकरणको साथ समग्र अनुभव अझ राम्रो बनाउने। रमाईलो सामान!
जब आईप्याड पहिलो पटक प्रस्तुत भएको थियो, मैले मौखिक रूपमा यसलाई फाडें जो सुन्थे सबैको लागि। एप्पल र स्टीव जॉब्सलाई साँच्चिकै विश्वास छ कि उनीहरूले नेटबुकलाई बेकार बनाउँछन्?
जे होस्, पछि अनुभव पछि हात पछि, म एक रूपान्तरण छु। UI अनुभव महान छ र विकासकर्ताहरूले आईप्याडको सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू दोहर्याउनको लागि सुन्दर, चिकना अनुप्रयोगहरू सिर्जना गरेका छन्।
जब म संस्करण २ सम्म कुर्छु, म बुलेटलाई काट्छु र आफैलाई किन्छु, ताकि म पनि शान्त भीडको हिस्सा बन्न सक्छु। 🙂
फ्लिपबोर्डको महान विवरण, यो एक उत्तम अनुप्रयोग हो। तपाईको वेबसाइट आईप्याडमा पढ्न योग्य छ भन्ने निश्चित गर्नका बारे राम्रो बिन्दु, निश्चित छैन कि सबैले सोच्दछन्।
म बिल्कुल यो प्रेम गर्दछु। चाँडै नै टाइप केहि अलि बढी धाराप्रवाह र बहु-टास्कि thorough राम्रोसँग परिष्कृत भएपछि, म मेरो ल्यापटपलाई घरमै छोड्दैछु र एक iPad को वरिपरि योग गर्दैछु।